5th Annual Report Of IRR 2012.pdf
3.1.Jadual Bertugas - AJK HEM 2019
Técnicas Kinésicas en Rehabilitación Respiratoria.pdf
Highschool - in NO hurry to shout (Piano Sheet).pdf
KB3no 1
Guia Conociendo El Centro
Black Cat - ရမ္မက်ရှိုက်သံ
A Prayer for the Ones Lost at Sea Lina Petkova
် ယာက် တစ်ယောက်
ပထမနှစ် - အချစ်တက္ကသိုလ်
ကျွန်တော် နောက်ဆုံးနှစ်စာမေးပွဲတွေပြီးလို့ အိမ်ပြန်လာတော့ အလုပ်အကိုင်ကလည်း မရှိသေး ၊
ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင် ၊ အိပ်လိုက်စားလိုက် ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်လိုက်နဲ့
လူပျင်းတို့ထုံးနှလုံးမူကာ မိဘပိုက်ဆံကိုထိုင်ဖြုန်းနေတုန်း တစ်နေ့ခေါင်းရင်းအိမ်က အန်တီချိုရီက
‘သားရေ မင်းလည်းအလုပ်မရသေးခင် အန်တီတစ်ခုလောက် အကူအညီတောင်းချင်လို့’
‘ပြောပါ အန်တီ ကူညီနိုင်တာဆို ကူညီပါ့မယ်။’
‘ဒီလိုကွယ့် မင်းညီမကဒီနှစ် ဆယ်တန်းတက်ရမှာ မင်းအပန်းမကြီးဖူးဆိုရင် စာလေးပြပေးပါလားလို့’
‘ရပါတယ် အပန်းမကြီးပါဘူး ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ဖတ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်’
ဒီလိုနဲ့ မိပန်းလေးကို ကျွန်တော် ဂိုက်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။လခကတော့ သိပ်မများပါဘူး .။အန်တီချိုရီ့ တို့မိ
သားစုကို ကူညီရုံသက်သက်ပါ။သူ့ခမျာ ယောင်္ကျားဆုံးထားတာ သုံးလေးနှစ်ပဲရှိသေးတော့
ဈေးဆိုင်တစ်ဖက်နဲ့ကလေးပညာရေးကို မကြည့်နိုင်ဘူးလေ။နောက်ပြီး သူတို့အိမ်နဲ့က
စာသင်ရတာလည်းအဆင်ပြေပါတယ် စာသင်နေတုန်းမှာစားစရာက လိုလေသေးမရှိ တစ်ခုပဲရှိတယ် မိပန်း
လေးက Grammer ပိုင်းတော်တော်လေး အားနည်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်။
ပေးနေရတယ်။မိပန်းလေးကို သတိထားကြည့်လိုက်မိတော့မှ တော်တော်လေးကို
( ×× ) နှစ်လောက်ဆိုပေမယ့် လူကောင်ကထွားတော့ တကယ့်အပျိုတွေအတိုင်းပဲ မိန်းမတစ်ယောက်မှာ
တာတွေ အကုန်ပြည့်စုံနေပါပြီ။တစ်ဖက်သားကို အသက်ရှူမှားလောက်အောင် လှသွေးကြွယ်နေပြီပေါ့။ လူကလည်း ပြင်တတ်ဆင်တတ်မို့ တစ်ခါတစ်လေ စာသင်နေရင်းနဲ့တောင်ပြစ်မှားချင်လာတယ်။အနီးကပ် နေတာကြာလာတော့လည်း ကျွန်တော့စိတ်တွေ ဖောက်ပြန်လာတာပေါ့။ သနပ်ခါးနံ့သင်းသင်းလေးကိုရှူလိုက်၊ စာငုံ့ရေးနေတုန်းပေါ်လာတဲ့ လည်ဟိုက်လေးထဲကရင်ညွန့်လေးကို ခိုးကြည့်လိုက်နဲ့သာနေရပြီး ၊ လူကြီးဆန်ဆန်ထိန်းသိမ်းနေရတာ မနိပ်ပါဘူး။စာသင်နေတုန်း ထိမိ ၊ ပွတ်မိတာလေးတွေနဲ့ပဲရင်ခုန်နေရပါတယ်။ တစ်နေ့တော့…အင်္ဂလိပ်စာ စာမေးပွဲစစ်တာလုံးဝမရလို့ ကျွန်တော်ဒေါသတော်တော်ထွက်သွားတယ်။ ဒီလောက်သင်ထားတာမရ ရမလားဆိုပြီး ကော်ပေတံနဲ့ငါးချက်လောက် ရိုက်လိုကတ်ာ ဒင်းကငိုပါလေရောဗျာ။ တော်တော်နဲ့ကိုမတိတ်ပါဘူး။စာလည်းဆက်မရေးတော့ဘူး။ စားပွဲခုံပေါ်ကိုခေါင်းစိုက်ကာအပီအပြင်ကိုငိုနေပါတယ် ကျွန်တော်လည်း မဖြစ်တော့ဘူးဆိုကာချော့လိုက်ရပါတော့တယ်။အနားသွားပြီးလက်မောင်းလေးကိုင်ကာ ‘ကဲ...မိပန်းလေးရေ တိတ်ပါတော့ကွာ ငါနောက်မရိုက်တော့ပါဘူး’ လို့ပြောလိုက်တော့ ‘မတိတ်ဘူး။သူ့အသားမဟုတ်တိုင်းရိုက်လိုက်တာ။နာတယ်။’ ဟုဆိုကာ လက်ကိုဖယ်ထုတ်ပါတယ်။ ‘မဟုတ်တာကွာ ငါကလည်းဒေါသနည်းနည်းထွက်သွားလို့ပါ။ ကဲလာ..ဘာတွေလာပြောနေတာလဲ’ လို့ပြောကာ ခေါင်းလေးပြန်ငုံ့သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းမိပန်းမျက်နှာလေးကို ပြန်မော့လိုက်ရင်း ‘အရမ်းချစ်တယ်…မိပန်းရယ်’ လို့ပြောကာ မိပန်းပါးလေးကို ဖွဖွလေးနမ်းရှိုက်လိုက်ပါတယ်။ ‘အို’.ု ..စာဆက်သင်ရအောင်နော်’ ‘မသင်ဘူး။မသင်တော့ဘူး။မေမေလာရင်ပြောလိုက်မယ်။သမီးကိုတအားရိုက်တယ်လို့’ ဟောဗျာ…ပြဿနာကတော့စပြီ။ဒီတော့ ကျွန်တော်လည်းပုခုံးလေးကိုဖက်ကာ ချော့လိုက်ပါတယ်။ သူကလည်း ဆက်ငိုနေတာမို့ တတွတ်တွတ်ပြောရင်းချော့ရင်းက သနပ်ခါးနံ့လေးကလည်းရလာတာမို့ ဆံပင်လေးကိုမသိမသာ လေးခိုးနမ်းလိုက်ပါတယ်။ လက်ကလည်းလက်မောင်းသားလေးကို အသာလေးပွတ်ပေးနေလိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့နားရွက်နားလေးကပ်ပြောလိုက် ၊ နားလေးကိုမသိမသာနမ်းလိုက် ကျောကုန်းလေးကိုပွတ်ပေးလိုက်နဲ့ ရသ လောက်အခွင့်အရေးယူနေမိပါတယ်။ ကျောကုန်းကိုပွတ်နေရင်းလက်က ချိုင်းကြားကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်သွားပြီးနို့လုံးလေးကိုဘေးတိုက်လေး ပွတ်ပေးနေလိုက်ပါတယ်။နှာခေါင်းလေးကတော့ပါးလေးကို မထိတထိလေးဖြစ်အောင်ခိုးခိုးနမ်းနေမိပါတယ်။ တအောင့်လောက်ကြာတော့ မိပန်းလည်းအငိုတိတ်သွားကာ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို မရဲတရဲလေးမော့ကြည့် လိုက်ရာ ကျွန်တော်လည်း ‘မိပန်းရယ်.ကိုယ်ရင်တွေခုန်နေတယ်ကွာ’ လို့တိုးတိုးလေးပြောလိုက်ပါတယ်။ ‘အိ.ကိုကြီးကလည်း.မင်းသိပ်လှတာပဲ.လို့ပြောကာမိပန်းတစ်ယောက်ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲကို ခေါင်းလေးဖွက်ထားပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်လည်းအလိုက်သင့်လေး ပြန်ဖက်ထားလိုက်ပါတယ်။ ...
.ချစ်တယ်ပေါ့’ လို့မေးလိုက်တော့ခေါင်းလေးညိတ်ပြပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲမရိုးမရွလေးဖြစ်လာပြီး မိပန်းပါးလေးကိုငုံ့နမ်းလိုက်တယ်။နောက်တော့ တဆတ်ဆတ်တုန်ရီနေတဲ့မိပန်း နှုတ်ခမ်းလေးကိုအသာလေးငုံကာ စုပ်ယူနမ်းရှိုက်လိုက်ရာ မိပန်းတစ်ယောက်ကျွန်တော့်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေးလာဖက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်လျှာကိုမိပန်းပါးစပ်ထဲ အတင်းထိုးထည့်ကာ လျှာချင်းကစားပေးလိုက်ရာ သူကလည်းသူ့လျှာလေးကိုပြန်ထုတ်ပေးပါ တယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေးအယူမျှလာပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းအတော်ကြာလေးနမ်းပေးလိုက်ရင်း လက်တစ်ဖက်က နို့လေးကိုအသာကိုင်လိုက်ရာ တစ် ချက်တွန့်သွားပြီး နည်းနည်းတော့ရုန်းပါတယ်။ဒါပေမယ့်သူ့လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ကျောမှာဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်က ကိုင်ထားတာကြောင့် ဘယ်လိုမှရုန်းလို့မရတာကြောင့်ပြန်ငြိမ်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းနို့အုံလေးကိုအပေါ်ကနေကိုင်ပေးနေရင်း နို့သီးခေါင်းလေးကိုစမ်းကာ ခြေပေးလိုက်ပါတယ်။ မိပန်းလေးလည်းတွန့်လိမ်သွားပါတယ်။ ဒီတော့ကျွန်တော်လည်း နှိပ်စေ့လေးတွေကိုတွန်းဖြုတ်လိုက်ကာ အတွင်းခံအုံကြားထဲ လက်နဲ့နှိုက်ကာနို့အုံ လေးကိုထုတ်လိုက်ရာ အပျိုဖော်ဝင်ကာစနို့အုံ လုံးလုံးကျစ်ကျစ်လေးကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းနမ်းနေတဲ့ပါးစပ်ကိုခွာလိုက်ကာ ပန်းနုရောင်ထနေတဲ့နို့သီးခေါင်းလေးကို အသာငုံပြီးစို့ပေးလိုက်ပါတယ်။မိပန်းခမျာကျောလေးကော့သွားပြီး ‘အ.လို့ပဲအသံထွက်လာပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းသူ့ရင်တွေတဒိုင်းဒိုင်းခုန်နေ တာကိုအတိုင်းသားကြားနေရပါတယ်။ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုလည်းအတင်းဖက်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းလက်တစ်ဖက်က ဒူးအထက်နားလေးကိုပွတ်ပေးနေလိုက်ပါတယ်။ပွတ်ပေးနေရင်းက စကပ်အောက်နားစလေးအောက်ကနေ လက်ကိုထိုးသွင်းလိုက်ကာ စောက်ပတ်လေးကိုအတွင်းခံပေါ်ကနေ စမ်းလိုက်ပါတယ်။အရည်တွေစိုနေတာကို လက်ကခံစားလိုက်ရပါတယ်။အထဲကိုမနှိုက်ဘဲ ဘောင်းဘီပေါ်က နေသာသာလေး အထက်အောက်ပွတ်သပ်ပေးနေရင်း နားရွက်ဖျားလေးကိုလျှာလေးနဲ့ကလိပေးလိုက်ရာ တစ်ကိုယ်လုံးတွန့်လိမ်လာကာ တအင်းအင်းနဲ့အသံလေးတွေပါထွက်လာပါတော့တယ်။ အောက်ကလည်း စောက်စေ့နားလေးကိုပဲဖိပွတ်ပေးနေရာ တစ်အောင့်လောက်ကြာတော့ကျွန်တော့်ကို တင်းတင်းလေးဖက်ကာငြိမ်ကျသွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လည်း မိပန်းကိုကြမ်းပေါ်အသာလှဲချလိုက်ကာစကပ် လေးကိုလှန်လိုက်ပြီး ဘောင်းဘီကိုမချွတ်ဘဲ လက်နဲ့အသာဖယ်လိုက်ကာ စောက်ပတ်လေးကိုလျှာလေးနဲ့ထိုးပေး လိုက်ပါတယ်။ ..အ.ကိုရယ်’...မိပန်းကို ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲမှာ ပက်လက်လေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်ရင်း ‘မိပန်း ပြောပါအုံး ကိုယ့်ကိုချစ်လားဟင်’ လို့ပြောရင်းနဖူးလေးကိုနမ်းလိုက်ပါတယ်။ ‘မသိဘူးကွာ။မိပန်းရင်တွေအရမ်းခုန်နေတယ်’ ‘ဒါဆို.
.အရမ်းအောင့်နေတယ်’ လို့ပြောလိုက်တော့ အုန်းဆီပုလင်းလေးထယူပြီး လီးကိုနည်းနည်းပွတ် လိုက်ကာ ပြန်သွင်းလိုက်ပါတယ်။အထဲကိုဝင်သွားပေမယ့် မိပန်းခမျာ နာလွန်းလို့ အံကြိတ်ကာခံနေရပါတယ်။ လက်ကလည်း ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကြီးကိုဆီးကာတွန်းထားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းတစ်ဝက်လောက်ပဲသွင်းကာ သာသာလေးညှောင့်ပေးလိုက်တော့ မိပန်းလည်းနည်းနည်းအရသာတွေ့လာဟန်တူပါတယ်။ အသံသိပ်မထွက်တော့ ဘူး။ကျွန်တော်လည်း အားလေးနည်းနည်းထည့်ကာ လက်ကျန်လီးတစ်ဝက်ကို ဖိသွင်းပေးလိုက်ရာ တားဆီးနေတဲ့အမြေးလေးကိုပါ မညှာမတာထိုးခွဲလိုက်ပြီး မဆန့်မပြဲကိုတစ်ဆုံးဝင်သွားပါတယ်။ စောက်ပတ်သေးသေးလေးမှာ လီးဒဏ်ကိုမခံနိုင်ပဲ နှုတ်ခမ်းသားလေးပါနည်းနည်းကွဲသွားပါတယ်။ ‘အား…နာလိုက်တာကိုရယ်......သိပ်ချစ်တာပဲကွာ’ တော်တော်လေးကြာအောင်ယက်ပေးလိုက်ရင်း စောက်စေ့လေးကိုပါးစပ်နဲ့စုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ‘အ...ဟင်း.ကို.အားလားလား....ကို..ပန်းမနေတတ်တော့ဘူး.ဘာတွေလုပ်နေလဲမသိဘူး’ ကျွန်တော်လည်း အကွဲကြောင်းလေးတစ်လျှောက် အထက်အောက်အသာလေးယက်ပေးလိုက်ရာ ‘အိုး.အ..’ အသံလေးကြားလိုက်ရတော့ ကျွန်တော်လည်းမာန်တက်လာပြီး ခပ်မြန်မြန်လေးယက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ‘အိုး.ရှီး...အင်း.ဟင်း.ညှာညှာတာတာလေးလုပ်ပါ’ ‘တဖြည်းဖြည်းကောင်းသွားမှာပါပန်းရယ်’ လို့ပြန်ပြောကာ အဝင်အထွက်မှန်မှန်လေးလုပ်ပေးနေလိုက်ပါတယ်။ မိပန်းခမျာ စောက်ပတ်သေးသေးလေးထဲကို မတန်တဆလီးကြီးအတင်းထိုးဝင်လာတာမို့ အသည်းခိုက်သွား အောင်နာလှပေမယ့်လည်း ကိကုတစ်စက္ကန့်တောင်အနားမပေးပဲဆက်တိုက်လိုးပေးနေတာမို့ အထဲကအရည် လေးတွေပါလိုက်လာကာ တစစ ကောင်းလာတာမို့ ပေါင်လေးနှစ်လုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖြဲကားပေးနေလိုက်ပါတယ်။ ကိုကြီးကျောပြင်ကိုလည်း လွတ်ထွက်သွားမှာစိုးတဲ့အလား တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးကိုဖက်ထားနေမိပါတယ်။ .ပန်းဘယ်လိုဖြစ်နေမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးကွာ’လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မိပန်းပေါင်ကြားထဲဝင်ထိုင်လိုက်ကာ လီးတန်ကြီးကို စောက်ပတ်ဝတေ့လိုက်ရင်း စောက်စေ့လေးကို ဒစ်ဖျားလေးနဲ့ပွတ်ပေးလိုက်ရာ ‘ကို..’ လို့ဆိုလကိုတော့ လီးတန်ကိုသေချာကိုင်ကာ အသာလေးဖိသွင်းလိုက်ပါတယ်။ အထဲမှာတင်းကြပ်နေပြီး ညှစ်ထားသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ‘ကိုရယ်…အရမ်းနာတယ်..‘အွန့်…ကို…ငရဲတွေကြီးကုန်တော့မှာပဲ.အ.တအားကြပ်တာပဲ’ ‘ဖြည်းဖြည်းလေးလုပ်ပေးမှာပါ မနာစေရဘူး’ လို့ပြောရင်းနည်းနည်းထပ်သွင်းလိုက်ရာ ‘မရဘူးထင်တယ်.
ကျွန်တော်လည်းခပ်သွက်သွက်လေးဆောင့်ပေးလိုက်ရင်း အချိန်ယူကာစိမ်ပြေနပြေလုပ်မယ်လို့လုပ် စိတ်ကူးထားပေမယ့် အထဲကစုဆွဲထားသလို တင်းကြပ်နေတာကြောင့် စောစောဘဲပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ တော်သေးတယ်။နှစ်ယောက်သား သောင်းကျန်းပြီးလို့ အဝတ်တွေပြန်ပြင်နေတုန်း အန်တီပြန်ရောက်လာပါတယ်။ နို့မို့ဆိုမလွယ်ဘူး။ အန်တီပြန်ရောက်လာတော့ ဟန်မပျက်စာကိုပဲဆက်သင်နေလိုက်ပါတယ်။မိပန်းလေးကတော့ ခေါင်းငုံ့ကာစာရေးနေပါ တယ်။စာသင်ချင်စိတ်လည်းမရှိတော့တာမို့ မိပန်းစာအုပ်လေးကိုယူကာ ‘ညကျရင်တွေ့ရအောင်’ လို့ရေးပေးလိုက်ကာ စာသင်တာကိုရပ်လိုက်ပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ရင်ထဲမှာတသသ ဖြစ်နေတာမို့ မြန်မြန်ညဖက်ရောက်ပါစေလို့ထိုင်ဆုတောင်းနေမိတယ် ကြားဖူးနားဝရှိတာနဲ့ကြက်ဥအကာကျက် ၂ လုံးသောက်ကာအားဖြည့်ထားလိုက်ပါတယ်။ ညဖက်လူကြီးတွေအိပ်တော့ မှခြံစည်းရိုးကိုအသာကျော်တက်လိုက်ရင်းမိပန်းတို့အိပ်ခန်းနားကိုကပ်လိုက်တော့ အန်တီ့ဟောက်သံတောင်ကြားနေပြီ မိပန်းကတော့စာထိုင်ကျက်နေပါတယ်။ ဒါနဲ့ပြတင်းပေါက်တံခါးလေးကိုသာသာလေးခေါက်လိုက်တော့မိပန်းလာဖွင့်ပေး ပါတယ်။လက်လေးကာပြလိုက်ကာပြန်ပိတ်သွားပြီးနောက်ဖေးတံခါးလာဖွင့်ပေးပါတယ်။ ‘ကိုဘာလုပ်တာလဲ’ ‘ပန်းကိုချစ်မလို့လေ’ ‘တော်ပြီကွာမလုပ်ပါနဲ့’ ‘မအောင့်နိုင်တော့ဘူးကွာ’ ‘မေမေနိုးသွားလိမ့်မယ်ပြန်တော့နော်’ ‘ပန်းကလည်းကွာ။ကိုယ်အရမ်းခံစားနေရလို့ပါနော်’ လို့ပြောကာမိပန်းကိုဖက်လိုက်ရင်း နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကိုအသာစုပ် ယူလိုက်ပါတယ်။မိပန်းလည်းရုန်းရင်းကန်ရင်းနဲ့ကျွန်တော့်ရန်ကလွတ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းနေရင်း ကလျှာကိုမိပန်းပါးစပ်ထဲပို့လိုက်ပြီးလက်တစ်ဖက်ကနို့အုံလေးကိုတစ်ရွရွနဲ့နယ်ပေးလိုက်ရာမိပန်းခမျာခေါင်းေ လးမော့ သွားရင်းအနမ်းတွေကိုတုံ့ပြန်လာပါတယ်။ လက်ကလည်းကျွန်တော့်ကိုတင်းတင်းကြီးဖက်လာပါတယ်။သူလည်းလိုချင်ပြီပေါ့။တစ်ခါကြုံထားရတော့ လည်းဘယ်အာသာပြေမတုန်း။ .
ကျွန်တော်လည်းအောက်ခံဝတ်မထားတဲ့မိပန်းနို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုအပေါ်ကနေ လက်နဲ့ညှပ်ကာခြေပေးလိုက်၊နို့အုံလေးကိုပွတ်ပေးလိုက်၊ ခပ်နာနာလေးညှစ်လိုက်နဲ့လုပ်ပေးနေတော့မိပန်းကျော လေးပါကော့တက်လာပါတယ်။ နောက်တော့တီရှပ်လေးကိုဆွဲလှန်လိုက်ရင်းစောစောကကျွန်တော်ကလိထားလို့ထောင် မတ်နေတဲ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုစို့ပေးလိုက်ရာမိပန်းတစ်ယောက်ငြီးသံလေးတွေပါထွက်လာပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့် ခေါင်းကိုလည်းရင်ခွင်ထဲအတင်းဖက်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းလက်တစ်ဖက်ကမိပန်းပေါင်တန်လေးတွေကိုပွတ်ဆွဲပေးနေရင်းစောက်ပတ်လေးကိုလက် ဝါးလေးနဲ့အုပ်ကာကိုင်ကြည့်လိုက်တော့အရည်တွေတော်တော်လေးထွက်နေပါတယ်။ ဒါနဲ့မိပန်းကိုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအ သာလေးလှဲလိုက်ရင်းထမီလေးဖြေလိုက်ကာစောက်ပတ်လေးကိုရွရွလေးပွတ်ပေးနေလိုက်ပါတယ်။ မိပန်းတစ်ယောက် တော့တွန့်လိမ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းထမီကိုအောက်ကိုတွန်းချလိုက်တော့မိပန်းကတင်ပါးလေးအသာကြွပေးပါ တယ်။ နို့စို့နေရင်းကနို့အုံလေးကိုတစ်ချက်ခပ်ပြင်းပြင်းလေးစုပ်လိုက်ရင်းအောက်ဖက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆင်းလာကာ ပေါင်ကြားလေးကိုလျှာစောင်းလေးနဲ့သိမ်းလိုက်ပြီးစောက်ပတ်လေးကိုအောက်ကနေပင့်ကာယက်ပေးလိုက်ပါ တယ်။ ‘အား.လား…လား…ကို…ရှီး’ လို့ဆိုကာခေါင်းလေးကိုလာကိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းစောက်ခေါင်းလေးထဲကိုလျှာထည့်ကာအထဲမှာမွှေပေးလိုက်ရာမိပန်းတစ်ယောက်ကော့တ က် လာပါတယ်။ အထဲမှာအားရအောင်မွှေပြီးတော့စောက်စေ့လေးကိုအသားပေးပြီးယက်လိုက်ရင်းလက်ခလယ်ကိုစောက် ခေါင်းထဲထည့်ကာကလိပေးလိုက်ပါတယ်။ မိပန်းတစ်ယောက်ပါးစပ်ကတတွတ်တွတ်နဲ့ရေရွတ်ကာဆံပင်တွေကိုအတင်း ဆွဲလာပါတော့တယ်။ငါးမိနစ်လောက်ကြာတော့မိပန်းတစ်ယောက်ကော့ပြန်လန်ကာငြိမ်ကျသွားပါတယ်။ ကျွန်တော့် ခေါင်းကိုလည်းအပေါ်ကိုအတင်းဆွဲကာအနမ်းတွေတဖွဖွပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းတအောင့်အနားပေးပြီးမိပန်းစောက်ပတ်ဝကို လီးတေ့လိုက်ပြီးအသာလေးသွင်းလိုက်ပါ တယ်။မိပန်းလည်းတစ်ချက်တွန့်သွားပြီးကျွန်တော့်ကိုအတင်းလာဖက်ပါတယ်။ ‘ပန်းရရဲ့လား’ ‘နာတော့နာတယ်။နေ့လည်ကလောက်တော့မနာတော့ဘူး’’ ‘ဒါဆိုထပ်သွင်းမယ်နော်’ ..
အင်း...အ.ဖြည်းဖြည်းကိုရယ်.ု .‘ဖြည်းဖြည်းတော့လုပ်ပါ။တစ်ညနေလုံးကွတတကြီးဖြစ်နေတယ်’ ‘ဒီတစ်ခါသိပ်မနာတော့ပါဘုးကွာ’ လို့ပြောကာတဖြည်းဖြည်းသွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ‘အား..တော်တော့ကို..မေမေတရေးနိုးတော့မယ်။နောက်နေ့တွေရှိသေးတာပဲ။ကျေနပ်တော့နော်’ လို့ပြောတော့ကျွန်တော်လည်းအန်တီ့ကိုသတိရသွားပြီးပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ နှစ်ယောက်သားအဝတ်တွေပြန်ဝတ်ပြီး ကျွန်တော်ပြန်မယ်လုပ်တော့ မိပန်းကတံခါးဝကိုလိုက်လာရင်းနှစ်ယောက်သားနှုတ်ဆက်အနမ်းတွေ တစ်ဝကြီးပေးကြ ရင်းလမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းနောက်ဖေးပေါက်ကနေအသာလေးပြန်တက်လာရင်း အိပ်ယာထဲကိုပြန်ဝင်နေ လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မိပန်း နေ့လည်ဖက်တစ်ခါ ညဖက်တစ်ခါ ခိုးစားနေကြတာနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပါပဲ။ ..အောင့်တယ်’ ကျွန်တော်လည်းတစ်ချက်ခြင်းသာသာလေးညှောင့်ပေးလိုက်ရာတစ်ဖြည်းဖြည်းအရည်တွေရွှဲလာတာမို့နည်းန ည်းမြန် ပေးလိုက်ပါတယ်။ ‘အင်း..ဘယ်လလိဲုကောင်းရဲ့လား’ လို့တိုးတိုးလေးကပ်မေးလိုက်တော့ ‘အ…အ.ကောင်းလားဟင်’ ‘အင်း’ ‘နောက်တစ်ခါလောက်ထပ်လုပ်ရအောင်လေ’ ‘အိ...ကိုရယ်ကောင်းတယ်။မေမေနိုးသွားအုံးမယ်ဖြည်းဖြည်း’ ကျွန်တော်လည်းမှန်မှန်လေးလုပ်ပေးနေမိပါတယ်။ စီးစီးပိုင်ပိုင်လေးနဲ့တော်တော်လေးကောင်းလာတာမို့စောစောပြီးမ သွားအောင်မနည်းထိမ်းနေရပါတယ်။ မိပန်းလည်းနေ့ခင်ဖက်ကလိုမဟုတ်တော့ပဲအောက်ကနေအဝင်ကောင်းအောင် နေတတ်သွားတာမို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အပေးအယူတော်တော်လေးမျှလာပါတယ်။ ‘ပန်း..ကောင်းလိုက်တာကိုရယ်’ လို့ပြောကာကျွန်တော့်ပါးလေးကိုနမ်းလိုက်ပါတယ် ကျွန်တော်လည်း နည်းနည်းမြန်မြန်လေးလုပ်ပေးလိုက်ရာမိပန်းတစ်ယောက်ကျွန်တော့်ကျောပြင်ကြီးကိုတအားဖက် ထားပါတယ်။ အထဲကလည်းအတင်းညှစ်ထားတာမို့ထိန်းနေလို့လဲမရတော့တာမို့အချက်တစ်ရာလောက်ဆက်တိုက် ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးညှောင့်ပေးလိုက်ရင်း ကျွန်တော်လည်းမိပန်းစောက်ခေါင်းထဲ သုက်ရည်တွေပန်းထည့်ကာမိပန်း ပေါ်ကိုမှောက်ကာကျသွားပါတယ်။ နှစ်ယောက်သားထပ်ရက်နားနေကြရင်း ‘မိပန်းလေး.
ဆေးလည်းသောက်ထားပါတယ်။’ ‘အာ.မဟုတ်တာ။ကျန်းမာရေးလည်းဂရုစိုက်အုန်း။ကျွန်တော်ဇက်ကြောနည်းနည်းဆွဲပေးမယ်လေ’ ‘အားနာစရာကွယ်’ ‘အားနာရမယ့်သူတွေမှမဟုတ်တာ၊အပန်းမကြီးပါဘူး’ လို့ပြောကာ အန်တီ့နောက်ကျောဖက်မှာ ခွေးခြေပုလေးယူထိုင်ကာ စတင်နှိပ်ပေးနေပါတယ်။နှိပ်ပေးနေရင်းက အန်တီ့ကိုသတိထားကြည့်လိုက်မိတော့ ကလေးတစ်ယောက်အမေသာဆိုတယ်။ တော်တော်အရွယ်တင်သေးတာပဲ။အသက်ကလည်း ၃၅ လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ သွေးသားဆူတုန်းအရွယ်ပဲလေ။သူ့ခမျာယောင်္ကျားဆုံးထားတာ ၆လလောက်ပဲရှိသေးတော့ သူလည်းစိတ်တွေရှိနေမလားလို့စဉ်းစားနေမိတယ်။ စဉ်းစားနေရင်း နှာခေါင်းထဲကိုသနပ်ခါးနံ့လေးကလည်းတိုးဝင်လာတာမို့ ရင်တွေနည်းနည်းလေးဖိုသွားပါတယ် အို. ....အန်တီ....ကျောင်းဖွင့်ချိန်ရောက်တော့ ရန်ကုန်ကမိပန်းဘကြီးက ကျောင်းတက်ဖို့လာခေါ်သွားတာမို့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ရင်ကွဲပက်လက်ဖြစ်ရပါတော့တယ်။မိပန်းသွားခါနီးညမှာ သုံးချီလောက်ဆွဲပေးလိုက်ကာ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ မိပန်းလည်း ရန်ကုန်ရောက်တော့ စာအဆက်အသွယ်လုပ်ပါတယ်။ကျွန်တော့်ကိုလွမ်းတဲ့အကြောင်း၊ သတိရတဲ့အ ကြောင်းရယ်၊အဆင်ပြေရင် ရန်ကုန်တက်လာဖို့ရယ်ပေါ့။တစ်လလောက်တော့ဒီလိုပါပဲ။လွမ်းလိုက်ရတာပေါ့။ တစ်နေ့ အပြင်သွားမလို့အိမ်ကထွက်လာရင်း မိပန်းတို့အိမ်ကို အလွမ်းပြေကြည့်လိုက်တော့ အန်တီထိုင်နေ တာကိုတွေ့ပါတယ်။သူလည်း သမီးကိုလွမ်းလို့ထင်တယ်။မျက်နှာသိပ်မကောင်းဘူး။ကျွန်တော်လည်း ယောက္ခမ လောင်းကို ဖားတဲ့အနေနဲ့ စကားမရှိ စကားရှာကာ ‘ဟင်..မသင့်တော်ပါဘူးလေ။သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ နောက်ဆိုယောက္ခမတော်ရမှာပဲ။ လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြေသိမ့်နေပါတယ်။အနှိပ်ခံ တဲ့သူကထိမထိတော့မသိဘူး။ကျွန်တော့်မှာ ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ မကောင်းတဲ့စိတ် လွန်ဆွဲနေပါတော့တယ်။ အပေါ်ကနှိပ် နေရင်း စိတ်တွေဖောက်ပြန်နေတာကို လည်ပင်းပေါက်ကနေ မြင်နေရတဲ့ နို့အုံထွားထွားကြီးတွေကလည်း မီးလောင်ရာလေပင့်ဆိုသလို အမှောင်ထဲတွန်းပို့နေတာမို့ အောက်ကကောင်ကလည်း ငြိမ်မနေတော့ပဲ ရုန်းကန်ထကြွလာပါတယ်။ ဟိုက်.ဆိုင်မထွက်ဘူးလား’ ‘အေးကွယ်..သေပြီ.ခေါင်းတွေကိုက်ပြီးဇက်ကြောလေးတက်နေတာပါ.နည်းနည်းနေသိပ်မကောင်းလို့ပါ’ ‘ကျွန်တော်ဆရာဝန်ခေါ်ပေးရမလားဒါမှမဟုတ်ဆေးခန်းလိုက်ပို့ပေးရမလား’ ‘နေပါစေကွယ်.ဒီနေ့ကျမှ အောက်ခံဝတ်မလာမိဘူး..
မမ’ ‘မင်းနဲ့မိပန်းတို့လုပ်နေကြတဲ့အချိန်ဆို မမမှာတစ်ယောက်ထဲစိတ်ဖြေနေရတယ်ကွာ’ လို့ပြောပြောဆိုဆို ကျွန်တော့်လုံခြည်ကိုအကုန်လှန်တင်လိုက်ပြီး စောစောက ကလိထားလို့အရည်တွေရွှဲနေတဲ့ ကျွန် တော်လီးတန်ကြီးကို သူ့ပါးစပ်ထဲထည့်ကာ ငုံစုပ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ ‘အား.ဟုတ်.နှိ်ပ်လေ.အန်တီ.....အားလားလား..မဟုတ်ပါဘူးအန်တီ’ ‘အန်တီလို့မခေါ်စမ်းပါနဲ့ကွာ..ဘာတွေများစဉ်းစားနေလဲ’ ကျွန်တော်လည်း သူခိုးလူမိဖြစ်သွားလို့ ထိတ်ထိတ်ပြာပြာနဲ့ ‘ဟို…မစဉ်းစားပါဘူး’ ‘မင်းစဉ်းစားနေတာသိပါတယ်။မိပန်းကိုမဟုတ်လား’ ‘ဗျာ…အန်တီဘယ်လို…သိလဲဟင်’ ‘ငါအကုန်သိတာပေါ့ မင်းည ညမိပန်းနဲ့ချိန်းတွေ့ပြီးဆော်နေကြတာလေ။’ ‘ဟုတ်…ဟုတ်…’ လို့ပဲပြောရသေးတယ်။အန်တီကကျွန်တော့်ဖက်ကိုလှည့်လာပြီး ပေါင်ကြားထဲမှာ ထိုးထိုးထောင်ထောင်ထွက်နေတဲ့ ကျွန်တော့်လီးကိုကြည့်ကာတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ရင်း လုံခြည်ပေါ်ကနေအသာလေးအုပ် ကိုင်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းရုတ်တရက်ဆိုတော့ ကြောင်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်ရုန်းမယ်လုပ်တော့ အန်တီ့ လက်က လုံခြည်အောက်စထဲကနေဝင်သွားပြီးထိပ်ဖျားလေးကို တရွရွလေးပွတ်ပေးနေတာမို့ ကျွန်တော်လည်းအရမ်း ကောင်းလာပါတယ်။အန်တီမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့ တကယ့်အပျိုဖြန်းလေးလို ရှက်သွေးဖြာနေတာကိုတွေ့ရပါ တယ်။အန်တီက လက်တစ်ဖက်ကဒစ်နားတစ်ဝိုက်ကိုပွတ်ပေးနေရင်း နောက်တစ်ဖက်ကဂွေးဥတွေကိုပါနယ်ပေးနေ ပါတယ်။ ‘မောင်မောင်’ ‘ဗျာ…အား…အင်းအင်း’ ‘မင်းငါ့ကိုအထင်သေးသွားပြီလားဟင်’ ‘အင်းကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်….မမလို့ခေါ်ပေါ့နော် ‘အင်း.အဲ.မမ’ မမလည်း ကျွန်တော့်လီးတန်အောက်ဖက်ကို လျှာနဲ့ဝိုက်ကာ ကစားပေးနေရင်း လက်ကလည်း ဂွေးဥနှစ်လုံးကိုဖွဖွလေး ကလိပေးနေရာ ကျွန်တော်လည်း မမခေါင်းကိုအတင်းဖက်ထားရပါတယ်။အတန်ကိုစုပ်ပေးနေရင်း .ဒါကြောင့်တစ်ချက်တစ်ချက်ကျောကုန်းကိုသွားထောက်မိပါတယ် ကျွန်တော်လည်းဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတုန်း ‘ဟဲ့..ရှီး....လက်ကဘာလို့ပျော့သွားတာလဲ.လားလား.
မောင်မောင်..အောက်ကိုရောက် သွားပြီး ဂွေးစိတစ်လုံးကို ပါးစပ်ထဲစုပ်သွင်းလိုက်ရာ ‘အိုး…မမရယ်။ကောင်းလိုက်တာ’ လို့ပြောကာကျွန်တော့်ဖင်ပါကြွတက်လာပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လည်းမမ နို့တွေကို အတင်းလှမ်းဆွဲကာ ခြေပေးနေပါတယ်။မမလည်းဂွေးစိကိုပြန်ထုတ်ကာ အချောင်းလိုက်ပြန်ငုံလိုက်ပြီး အပေါ်အောက် ခပ်သွက်သွက်လေးလုပ်ပေးလိုက်ရာ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှတောင့်မခံနိုင်တော့ဘဲ မမပါးစပ်ထဲအပြည့်သုက်ရည်တွေ ပန်းထုတ်မိပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လည်းအားနာကာ မမကိုထွေးထုတ်ဖို့ပြောတော့ မမကကျွန်တော့်ကိုတစ်ချက် ပြုံးပြကာ အားလုံးမျိုချလိုက်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း မမ မျက်နှာကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်ကာ အနမ်းတွေပေးလိုက်ရင်း အလိုက်သင့်လေးဆွဲထူလိုက်ကာ အခန်းထဲကိုခေါ်ခဲ့ပါတယ်။မမလည်းတစ်ချက်လှည့်ထွက်ကာ တံခါးပြေးပိတ်လိုက်ပြီး အိမ်ခန်းထဲကိုအပြေးလေးဝင် လာပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမမ ကိုယ်လုံးလေးကိုဆီးဖက်လိုက်ကာ နှစ်ယောက်သား အငမ်းမရနမ်းနေကြရင်း အဝတ်အစားတွေအကုန်ချွတ်ပြစ်လိုက်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းမမကို ခုတင်ပေါ်အသာလှဲစေပြီး မမပေါ်ကနေအုပ်မိုးလိုက်ကာ မမရဲ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုစုပ်ယူ လိုက်ရင်း လက်တစ်ဖက်က နို့အုံလေးကိုခပ်တင်းတင်းလေးခြေပေးလိုက်ပါတယ်။ မမကလည်းကျွန်တော့်အနမ်းတွေ ကိုကျွမ်းကျင်စွာပြန်လည်တုံ့ပြန်ရင်း ကျွန်တော့်ကိုယ်လုံးကိုဖက်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း မမလည်တိုင်လေးကို စုပ်ပေးလိုက် နားသီးလေးကိုစုပ်ပေးလိုက်လုပ်နေတာမို့မမတစ်ယောက် သဘောတွေ့နေပါတယ်။ နောက်တော့အောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းလာပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို အားနဲ့စို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ‘အိုး.အရမ်းကြမ်းတာပဲကွယ်။ပြုတ်ထွက်ကုန်တော့မှာပဲ’ နို့သီးခေါင်းလေးကိုစုပ်ပေးလိုက် နို့အုံလေးကိုယက်ပေးလိုက်နဲ့ အားရအောင်ကစားနေတုန်း မမကကျွန်တော့်ခေါင်း ကိုလက်နဲ့အောက်ကိုတွန်းချပေးလိုက်တော့ ကျွန်တော်လည်း မမဘာလိုနေတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ပြီး အောက်ကို တဖြည်းဖြည်းဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။အောက်ရောက်တော့ စောက်ပတ်ကိုမယက်သေးပဲ ပေါင်ကြားလေးကိုပဲဝေ့ဝိုက်ကာ ..
လား..အီး...ခပ်သွက်သွက်လေးလုပ်ပေးနော်’လို့ပြောလာပါတယ်။ .မောင်ရယ်’ လို့ဆိုကာကျွန်တော့်ခေါင်းကိုအတင်းဖိကပ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော့်လည်း လျှာကိုစောက်ခေါင်းထဲပို့ကာ အထဲမှာစိတ်ရှိလက်ရှိမွှေနှောက်ပေးလိုက် စောက်စေ့လေးကိုယက်ပေး လိုက်နဲ့လုပ်ပေးနေရာ မမတစ်ယောက် တအီးအီးနဲ့ ငှက်ဖျားတက်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ‘အား.အသည်းထဲကိုခိုက်သွားတာပဲ’ လို့ပြောလိုက်တော့ မမအသံလေးကြားရတော့ ကျွန်တော်ပိုပြီးဖီးတက်သွားကာ အဝင်အထွက်ခပ်မှန်မှန်လေးလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။မမက အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား အိမ်ထောင်သည်မို့ ကျွန်တော်ဆောင့်လိုက်တဲ့ဆောင့်ချက်တိုင်း ကို ကောင်းကောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အချက်လေးငါးဆယ် မနားတမ်းဆောင့်ပေးလိုက်ပြီးနောက် ‘ ‘မ..လား..မောင်လေးရယ်.အား.လား.ကောင်းလိုက်တာကွယ် မရပ်ပါနဲ့ဆက်လုပ်ပေးပါ။’ိလို့တောင်တောင်းဆိုလာပါတော့တယ်။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း လက်ခလယ်ကို စအိုဝလေးထဲအသာလေး ထိပ်ဖျားလေးထိုးသွင်းပေးလိုက်ကာ စောက်စေ့လေး ကို နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကြားစုပ်ပေးလိုက်တော့ စောစောကစအိုဝကိုထိုးသွင်းလို့ လက်ကိုအတင်းဆွဲဖယ်ပေမယ့် ကျွန်တော် စုပ်လိုက်တဲ့ဒဏ်ရော စအိုထဲကကောင်းတဲ့ဒဏ်ပါနှစ်ခုပေါင်းကာ မမတစ်ယောက် ကော့ပြန်လန်နေပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်အားရအောင်ကလိပေးလိုက်ပြီးတော့မှ အသာလေးပြန်ထိုင်လိုက်ကာ ‘မမ..လား....ဒီလိုကပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်’ လို့ပြောလိုက်ရာ မမလည်း လေးဖက်ထောက်ကာ ခေါင်းလေးစိုက်ပြီး အလိုက်သင့်လေးကုန်းပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မမခါးလေးကိုကိုင်ကာ စိတ်တိုင်းကျနေရာပြင်လိုက်ပြီး ပြူထွက်နေတဲ့မမစောက်ပတ်ကြီးကိုသေချာ ချိန်ကာ တစ်ရှိန်ထိုးဆောင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ‘အား.ယက်ပေးနေရာ မမတစ်ယောက် မနေနိုင်တော့ပဲ ကျွန်တော့်ခေါင်းနဲ့မတည့် တည့်အောင်နေရာလိုက်ပြင်ပေးနေပါတယ် ကျွန်တော်လည်း သနားသွားပြီး အရည်တွေလဲ့နေတဲ့ မမစောက်ပတ်ကြီးကို အောက်ကနေပင့်ကာ စောက် စေ့အထိကို တစ်ချက်သိမ်းဆွဲပေးလိုက်ရာ ‘အား.......ကျွန်တော်သွင်းလိုက်တော့မယ်နော်’ လို့ပြောလိုက်ရာ မမကခေါင်းလေးညိတ်ပြပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း လီးတန်ကြီးကို အရင်းနားကနေကိုင်ကာ မမစောက်ပတ်ဝလေးကိုတေ့လိုက်ပြီး ခပ်ဖြည်းဖြည်းလေး သွင်းပေးလိုက်ရာ ‘အား…ကျွတ်ကျွတ်..ကောင်းလိုက်တာကွယ်.ကျွန်တော့်ကိုကုန်းပေးပါလား.အား.ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်.
...သေပါပြီမောင်လေးရယ်။ကွဲများထွက်ကုန်ပြီလားမသိဘူး’ ကျွန်တော်လည်း မြန်မြန်လုပ်ချင်ပေမယ့် အထဲကညှစ်ထားသလိုအရမ်းကြပ်နေတာကြောင့် ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲလုပ်ပေး နေပါတယ်။မမလည်း ကျွန်တော့်ကိုချစ်လို့သာလိုက်လျောရပေမယ့် သူလည်းတော်တော်လေးကိုခံစားနေရပါတယ်။ တအောင့်လောက်ကြာတော့ နည်းနည်းလေးချောင်သလိုဖြစ်လာတာမို့ မှန်မှန်လေးဆက်သွင်းပေးနေလိုက်ပါတယ်။ .ု .ကျွန်တော်လည်း အားရှိပါးရှိလုပ်ပေးလိုက်ရာ အခန်းတစ်ခန်းလုံး မမဖင်နဲ့ကျွန်တော့်ဆီးခုံရိုက်သံ တဖတ်ဖတ်ထွက်နေ ပါတော့တယ်။မမတစ်ယောက်လည်းခေါင်းဘယ်ညာရမ်းကာ ကျွန်တော်ဆောင့်ပေးတဲ့ဒဏ်ကိုကြံ့ကြံ့ခံနေပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းအပေါ်ကဆောင့်ပေးနေရင်း စိတ်ကူးတစ်မျိုးရလာလို့ လက်ခလယ်ကို တံတွေးဆွတ်ကာ မမဖင်ပေါက် ထဲထည့်ကာ တဖြည်းဖြည်းအပေါက်ချဲ့ပေးနေပါတယ်။ မမက ဖင်ထဲထည့်ထားတဲ့ကျွန်တော့်လက်ကိုအတင်းဆွဲဖယ်နေပေမယ့် ကျွန်တော်ကပြန်ဖယ်ထုတ်ကာ လက်ခလယ်ကို ခပ်နက်နက်လေးဝင်အောင်သာထိုးသွင်းနေပါတော့တယ်။ ‘အိ.မောင်လေးရယ်..အဲဒါကိုမလုပ်ပါနဲ့’ ခေါင်းလေးလှည့်လာကာတောင်းပန်ပါတယ်။ ‘ကျွန်တော့်ကိုချစ်ရင်လိုက်လျောပါမရယ်’ လို့ပြောကာ လက်ကျန်တစ်ဝက်ကို အနာခံကာ ဆက်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ ‘အား..နာလိုက်တာကွယ်.ခက်လိုက်တာ.ဘာတွေလုပ်နေတာတုန်း’ လို့ပဲပြောကာ ကျွန်တော့်ကိုပြောမရမှန်းသိလို့လက် လျှော့သွားပါတယ်။တစ်အောင့်လောက်နေတော့မမတစ်ယောက် တစ်ချက်တွန့်လိမ်သွားကာပျော့ခွေကျသွားပါတယ်။ မမပြီးသွားတယ်နဲ့တူပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းမမကိုအနားပေးလိုက်ပြီး ချိုင်းကြားထဲကနေ နို့အုံလေးကိုလှမ်းခြေပေးလိုက်ရင်း မမကျော တစ်လျှောက်လျှာနဲ့သိမ်းကာယက်ပေးလိုက်ရာ မမတစ်ယောက်ကျောလေးပါကော့တက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စောက်ဖုတ်ထဲကလီးကိုပြန်ထုတ်လိုက်ရင်း စောစောကလမ်းကြောင်းထားတဲ့ စအိုဝလေးကိုတေ့လိုက်ပြီး ဒစ်ဖျားကို လက်မနဲ့ဖိကာ အတင်းသွင်းလိုက်တော့ ဒစ်ဖျားလေးကြပ်ကြပ်တည်းတည်းနဲ့ဝင်သွားပါတယ်။ မမလည်းခါးလေးကုန်း သွားပြီးအတင်းရုန်းထွက်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်။ကျွန်တော်က ခါးကိုတင်းတင်းလေးကိုင်ထားကာ နည်းနည်းချင်းသွင်းပေး လိုက်ပါတယ်။ ‘အား.
.net) မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။ ဇာတ်လမ်းကပြီးဆုံးသေးအံ့မထင်၊ ခေါင်းစဉ်အရဆိုလျှင် ပြီးပီဟု ယူဆရင်လဲ ယူဆနိုင်သည်။ ဆွဲဆောင်မှု အားကောင်းကောင်းဖြင့် အမေနဲ့ သမီး တို့ ရဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကို ဆက်လက်အတွေးနယ် ချဲ့ ချင်သလောက်ချဲ့ နိုင်အောင် ရေးသားနိုင်ပါပေ၏။ ဆက်ရေးခဲ့သော် ဒုတိယပိုင်းပေါ့ဗျာ။ ဒေါက်တာသက်ထွေး ၁၉၊၈၊၂၀၁၂ ..‘မ.အဆင်ပြေရဲ့လားဟင်’ ‘နာတာပေါ့မောင်လေးရယ်။ဒီကသူ့ကိုချစ်လို့သာလိုက်လျောရတာ။သေမတတ်ပဲ’ ‘အခုရောကောင်းလား’ ‘နည်းနည်းလေးတော့ကောင်းလာပြီသိပ်မကြမ်းနဲ့နော်မောင်။’ ကျွန်တော်လည်းခပ်မှန်မှန်လေးလုပ်ပေးနေရင်း ကအထဲကတအားကိုညှစ်ထားတာကြောင့် ဆက်ထိန်းထားလို့မရ တော့ပဲလွှတ်လိုက်ရပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်ရောမမပါ ထပ်ရက်ခုတင်ပေါ်ကိုကျသွားပါတော့တယ်။နှစ်ယောက်သား တပ်မက်စွာနဲ့အတော်ကြာ နမ်းနေကြပြီးနောက်။’ ‘မ.ကောင်းတယ်မဟုတ်လား’ ‘အရမ်းကောင်းတာပဲမောင်ရယ်။နောက်ဆိုနေ့တိုင်းလာနော်’ ‘စိတ်ချပါမရဲ့။နောင်မှသာလုပ်လွန်းလို့ မ ထွက်ပြေးနေရမယ်။’ ‘ဟင်းနော်လူဆိုးလေး။အမေရောသမီးရောသူလိုးတယ်’ ‘မိပန်းပြန်လာရင်ကော မ’ ‘လွယ်ပါတယ်မောင်ရယ်။မိပန်းနဲ့မင်းနဲ့ယူလိုက်ကြပေါ့။ဒါပေမယ့် မကိုတော့ပစ်မထားရဘူးနော်’ ‘သိပ်ကောင်းတဲ့အကြံပေါ့မရယ်’ လို့ဆိုကာ နောက်တစ်ချီ ချဖို့အတွက်အရှိန်ယူတဲ့အနေနဲ့ မကိုယ်လုံးလေးကိုဆွဲဖက် လိုက်ရင်း နှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းရှိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။ ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကတစ်ယောက်သူတို့သားအမိနှစ်ယောက် ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူများ ကိုယ့်ဖာ သာကိုယ်သာ ဆက်လက်ခံစားကြပါတော့ခင်ဗျား။ ။ အချစ်တက္ကသိုလ် ( http://achittatkatho.
Documents Similar To နှစ်ယောက်-တစ်ယောက်
More From Thet888
135651701-Quimica-Analitica-Cuantitativa-Vogel.pdfUploaded by fefredom
5th Annual Report Of IRR 2012.pdfUploaded by afrizalzamaludin
Fotograpi RuslanUploaded by Anonymous Aw92AqVSHt
actividades_rompehielo.pdfUploaded by vladi
ManualHistoria.pdfUploaded by Cintia Sanchez